तीन नेता तीनतिर, कसका के-के छन् अडान ? « Postpati – News For All
तीन नेता तीनतिर, कसका के-के छन् अडान ?
चैत ५, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला पुन: प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि १८ फागुनमा बैठक बसेको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
२०७६ चैत्र ५,बुधबार को दिन प्रकाशित